साञ्चेजलार्इ किन सुनाइयाे डेढ वर्ष जेल सजाय? | Suvadin !
साञ्चेजलार्इ किन सुनाइयाे डेढ वर्ष जेल सजाय?
स्पेनको कानुन दुई वर्षभन्दा कम सजायँमा जेल बस्नु नपर्ने भएकाले उनलाई जेलमा बस्नु पर्छ नै भन्ने छैन। स्ट्राइकर साञ्चेज गत जनवरीमा आर्सनलबाट म्यानचेस्टर युनाइटेडमा गएका थिए। सान्चेजले सन् २०१२ देखि २०१३ सम्म बार्सिलोनाबाट खेलेका थिए। त्यही बेला उनले ९ लाख पाउण्ड कर छलेको दावीसहित मुद्दा परेको थियो।
Feb 08, 2018 13:49
काठमाडौं, २५ माघ – फुटबलर एलेक्सिस साञ्चेजलाई स्पेनको एक अदालतले एक वर्ष ६ महिनाको जेल सजायँ तोकेको छ। कर छलीको आरोपमा साञ्चेजविरुद्ध यस्ताे सजाय सुनाएकाे हो।
उनी सर्वाधिक कमाउने खेलाडीहरुमध्येमा पर्दछन्। उनको आम्दानी हप्ताको ६ लाख पाउण्ड छ। बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सी र रियल मडि्रडका क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि पनि कर छलेको आरोप लागेको छ।